चौरीखोलाको पक्की पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
चौरीखोलाको पक्की पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र
माघ २८, २०७४ 1424 ऊर्जा खबर/रामेछाप
रामेछाप र काभ्रे जिल्लालाई जोड्ने चौरी खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल अलपत्र परेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण ३ वर्षअघि नै सञ्चालनमा आउनु पर्ने पुल अलपत्र परेको हो ।
पुल समयमा निर्माण हुन नसक्दा दोरम्बा र सुनापति गाउँपालिकाका स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । पुल नभएकै कारण वर्षा यामका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको जोहो हिउँद याममा गर्नु पर्ने बाध्यता स्थानीयलाई छ ।
‘पुल नबन्दा दैनिक प्रयोजनको सामान आयात गर्न ठूलो समस्या छ,’दोरम्बा–६ का वडा अध्यक्ष अम्बिकाप्रसार गजुरेलले भने, ‘६ वर्षदेखि ठेकेदारले काम नगर्दा स्थानीयलाई सास्ती भएको छ ।’
वर्षौसम्म काम नगरी आलटाल गर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । पुल निर्माणको ठेक्का एनएन निर्माण सेवाले लिएको छ । हिउँदमा खोलाबाट सवारी साधन आवत जावत गर्नसक्ने भए पनि वर्षा याममा समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
हिउँदभर हराउने ठेकेदारले वर्षा लागेपछि खोलामा आई काम गरेजस्तो देखाएर ठगीरहेको गजुरेलको आरोप छ । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पुलको निर्माण कहिले पूरा हुने हो, अझै अनिश्चित छ ।
चौरीखोलामा पुल निर्माण भई सञ्चालन हुने हो भने दोरम्बाबाट मन्थली हुँदै काठमाडौं आवत जावत गर्न सहज हुनेछ । अहिलेसम्म ठेकेदारले पुलको ३ वटा पिलर निर्माण गरेको छ । एक खण्डको ढलान भएको छ भने दुई वटा पिल्लर जोड्ने ढलान बाँकी छ ।
पुलको ठेक्का आह्वान गर्नेक्रममा सर्वोद्धार/रफेन्सर’ एनएन जेभीले वास्तविक लागतभन्दा दुई गुणा कम दरमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । ३ करोड लागत अनुमान गरिएको ६१ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । अहिले यसैलाई कारण देखाउँदै ठेकेदारले पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ ।